Zimbabwe, Nepal readmitted as ICC members - BaaghiTV English
By Maryam Mahmood Khan	 On Oct 15, 2019 133 0
ISLAMABAD, Oct 15 (APP):Zimbabwe and Nepal have been readmitted as International Cricket Council (ICC) Members following the conclusion of the ICC Board meetings in Dubai on Tuesday.
Zimbabwe was readmitted by the ICC Board following a meeting with the ICC Chairman and Chief Executive, Zimbabwe Cricket Chairman Tavengwa Mukuhlani and Zimbabwe Sports Minister Kirsty Coventry and Gerald Mlotshwa, the Chairman of the Sports and Recreation Commission, said an ICC press release issued here.
ICC Chairman Shashank Manohar thanked the Zimbabwe Sports Minister for her commitment to the reinstatement of Zimbabwe Cricket. “Her desire to work in support of Zimbabwe Cricket was clear and she has unconditionally complied with the conditions set down by the ICC Board. Funding to Zimbabwe Cricket would continue to be on a controlled basis as part of a collective effort behind getting the game in Zimbabwe back on an even keel,” he said.
Zimbabwe would now be able to take up their place in the ICC Men’s Under-19 Cricket World Cup in January and the ICC Super League later in 2020.